Washiya ubuthisha wangena ematekisini | Isolezwe
Washiya ubuthisha wangena ematekisini
intandokazi / 11 October 2018, 10:19am / PHILI MJOLI
UNKK SIBUSISIWE Thabede unobhala wokuqala wesifazane kwiNanda Taxi Association obuye abengunobhala kweSANTACO, Greater North Region
. Isithombe: GCINA NDWALANE
UKE wawulaxaza phansi umsebenzi wamatekisi owesifazane wokuqala ukuba ngunobhala kusoseshini waseNanda.
UNkk Sibusisiwe Thabede ongene embonini yamatekisi ngo-2005 ngemuva kokushona komyeni wakhe uthe ubunzima balo msebenzi bamenza washiya phansi.
Uthe ngesikhathi engena kuwo ngemuva kokushona komyeni wayengazi lutho ngetekisi, wayegxile emsebenzini wakhe wobuthisha engazikhathazi ngokuthi kwenzekani ematekisi.
Umyeni wakhe washiya amatekisi ayisithupha.
Ngesikhathi sekungene yena uthe imali yayingena kancane ngoba abashayeli babemkhohlisa ngenzinto eziningi ababazi ukuthi akazazi.
“Ngesinye isikhathi umshayeli wayebuya nemali engaphelele athi uthenge insimbi ethile yokukhanda imoto, ngamukele lokho ngoba ngingazi ukuthi leyo nsimbi ibiza malini.
“Kwesinye isikhathi nami ngangenza izinqumo ezithile ezaziholela ekutheni amatekisi angasebenzi ngendlela ayesebenza ngayo kusekhona umyeni wami.
“Ngokuhamba kwesikhathi ngagcina sengibonile ukuthi kulo mkhakha ibhizinisi lenziwa kanjani.
“Ngafunda ukuthetha into engingayazi nokugada ukuthi abashayeli basebenza kanjani,” kusho yena.
Uqhube wathi uthe esejwayele kwaba nezinkinga kusoseshini.
Uthe wehluleka ukubhekana nazo wakhetha ukuwadayisa amatekisi ngo-2013, wabuyela emsebenzini wakhe wokuba uthisha ngo-2014.
“Ngashiya amatekisi amabili kuphela ayengisiza ukuthi ngikwazi ukondla izingane, ngangingasenalo uthando lwaleli bhizinisi. Ngizibona sengathi ngisemkhakheni onezinselelo engingakwazi ukuzimela,” kusho yena.
Wafundisa imiyaka emibili ngo-2016 wabuyela ematekisini. Uthe ngesikhathi ebuya wayesecabanga ukuthi usezothatha umhlalaphansi engafuni ukuhlala ekhaya.
“Ngacabanga amabhizinisi amaningi ngagcina ngifikelwe ukuthi kungani ngingabuyeli ematekisini ngoba senginalo ulwazi. Okunye okwakungikhuthaza ukuthi abanye abanikazi bamatekisi babengitshela ukuthi amatekisi awafani nobuthisha okuthi uma eseshonile kube kuphelile, akekho omunye ongasebenzisa iziqu zakhe. Ematekisini isitifiketi siyadluliseleka esizukulwaneni,” kusho yena.
Ngenhlanhla uthi ubuyele sekunoshintsho oluningi ematekisini.
Uthe bese kunezinhlelo eziningi zokuqeqeshwa kosomatekisi kanye nabashayeli ngaleli bhizinisi.
Uthe ukhethwe ukuthi abe ngunobhala walo soseshini nyakenye. Ngawo futhi lo nyaka uthe uqokwe ukuthi abe ngunobhala weSantaco, emkhandlwini wamatekisi aseNyankatho yeTheku iGreater North Region.
“Ukuba unobhala isikhundla esibalulekile kusoseshini, uwomgogodla. Uhlale uyingxenye yezinqumo ezithathwa yisigungu esiphezulu salowo soseshini. Njengamanje kowethu usoseshini sathatha isinquno sokuthi sikhokhe imali ethile ngenyanga yamathayi. Uma imoto idinga ithayi kuyiwa ehhovisi lifakwe lokho kwenza ukuthi kusetshenziswe amathayi aphephile kudaleke namathuba emisebenzi eyengeziwe. Uma kunemiyalezo okumele ikhishwe usoseshini unobhala nguye okumele ayibhale. Kuyo yonke imihlangano ebalulekile kumele abe khona,” kusho yena.
Njengoba ekwiSANTACO uthe akagcini ngokubhalana nososeshini wakhe kodwa uba yingxenye yokuthathwa kwezinqumo ngamatekisi ahambela enyakatho eyeTheku.
Uthe osomatekisi besifazane bakhona kodwa bayidlanzana abakwazi ukufinyelela esigabeni akusona.
“Ziningi izizathu zalokhu abanye basemanqikanqika ukungena bathi shi ngenxa yokuthi le mboni inamadoda amaningi. Kwesinye isikhathi nawo amadoda asangabaza ukufaka abesifazane ezikhundleni ngoba ebona sengathi ngeke bakwazi ukumelana nomsebenzi onzima,” kusho yena.